सम्बद्धको एक मत त्रिभुवनचोकमा ! – sunpani.com
सम्बद्धको एक मत त्रिभुवनचोकमा !
नेपालगञ्ज – हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाट नै शुरु हुन्छ । दुई पुर्याउन पहिला एक पार गर्नुपर्छ । एकको महत्व यहीबाट शुरु हुन्छ । अझ चुनावमा त एक मतको कति महत्व हुँदोरहेछ, नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको निर्वाचनले फेरि एकपटक स्मरण गरायो ।
कुरा सम्बद्ध सदस्यको हो । चुनावमा सबै पदका लागि छुट्टा छुट्टै बाकस बनाइएको थियो । सम्बद्धको एक मत कसले गोजीमा हालेर लग्यो पत्तै लागेन । शुरुमा त अर्को बाकसमा परेको अनुमान गरियो । तर, राती १२ बजेसम्म सबै बाकस खोलिसकिदा पनि त्यो एक मत भेटिएन ।
दुई जनामध्ये एकजना सलाउद्दिन जसगढले दिउँसो १२ बजे जीतको अविर दलिसक्दा अर्का विजयी सदस्यको पत्तै लागेन । किनकी, दुई जनाको मत बराबरी भयो । निर्णायक मानिएको एक मत हरायो । बद्री श्रेष्ठ र भीम कँडेल १२-१२ मत लिएर एक मतको टेन्सनमा परिरहनु भयो । उनीहरुको टेन्सन राती १२ बजेसम्म रह्यो । यी दुई जना दिउँसो १२ देखि राती १२ बजेसम्म के हुने हो भन्ने तनावमा रहिरहे ।
सम्बद्धमा २५ मत खसेको थियो । त्यसमा कँडेल र श्रेष्ठको भागमा १२-१२ मत पर्न आयो । उम्मेदवारहरु नभेटिएको मत कसको होला ? भनेर माथा घुमाइरहे । मतगणना परिसरमा हराएको एक मत त्रिभुवनचोकमा भेटिएको खबर पनि फैलियो । खासमा यो बराबरीको तनावमा रहेका उम्मेदवारलाई चुस्की लिनलाई थियो ।
दुवै उम्मेदवारले एक मतको महत्व राम्ररी बुझ्ने मौका पाए । चुनाव कतिपय बेलामा ‘ह्या त्यसले एक मत नदिएर के हुन्छ र ?’ भन्ने पनि गरिन्छ । यो त घातक हुने रहेछ । चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुने हरेकले एकको महत्व बुझ्न जरुरी रहेछ ।
संघमा बराबरी मत ल्याएका श्रेष्ठ र कँडेललाई आधा आधा कार्यकाल दिने तयारी भएको छ । उनीहरुले डेढ-डेढ वर्ष काम गर्ने छन् । एक मतले डेढ वर्ष घटाइदिएको छ । कसले पहिलो डेढ वर्ष काम गर्ने तय भइसकेको छैन ।
पछिल्लो दुई निर्वाचनमा बराबरी मत परिणाम आएर आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने परिस्थिति बनेको छ । हालै सम्पन्न परिवार नियोजन संघमा पनि अध्यक्षमा एक सय २१, एक सय २१ मत आउदा आधा आधा कार्यकाल बाँडिएको छ ।